Seranam-piaramanidina Utapao (U-Tapao), Pattaya ~ Journey-Assist - scoreboard an-tserasera
Pejy fandraisana » Jeografia, seranam-piaramanidina, famindrana manerana an'i Thailand » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Seranam-piaramanidina Utapao (U-Tapao), Pattaya
Seranam-piaramanidina Utapao (U-Tapao), Pattaya
Fijerena ny seranam-piaramanidina Utapao (U-Tapao) ao Pattaya
Rafitra seranam-piaramanidina Utapao
Utapao antsipirihany momba ny fifandraisana seranam-piaramanidina sy ny fomba hahazoana
Saripika sy Tiorka ao amin'ny seranana ao Utapao
Scoreboard amin'ny fahatongavana sy fiainga. Seranam-piaramanidina Utapao
Seranam-piaramanidina U-Tapao any Pattaya
Ity seranam-piaramanidina ity dia efa niasa nandritra ny 50 taona. 45 km any Pattaya no misy azy ary 190 km miala an'i Bangkok.
Tsy misy sidina mivantana avy any Mosko mankany Pattaya. Raha tonga eto amin'ny CIS ianao dia mila lalana mampitohy an'i Bangkok. Azonao atao ihany koa ny manidina ho any Bangkok (avy any Moskoa mandositra 10-12 ora) ny sidina, avy eo afindra ao anaty bus (adiny roa hafa).
Ny orinasa lehibe izay ampiasain'ny olon-drehetra izay manidina eto Rosia dia UTair sy Yamal. Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Utapao mankany Pattaya dia afaka mitaingina taxi, minibus na tuk-tuk. Ireo karazana fitaterana fitaterana rehetra manaraka ny lalambe Sukhumvit. Azo atao mialoha ny manomana mialoha minibus ao Pattaya amin'ny vidiny $ 8 (250 baht). Handeha 40 minitra ka 2 ora ny dia. Fa hahalala bebe kokoa momba izany ity pejy eto ambany ity.
Utapao no misy ny eo akaikin'ny toby miaramila. Ity fiantraikany amin'ny bandwidth sy ny ambaratonga serivisy ity. Sarotra ny mahazo any amin'ny varavarankely fisoratana anarana noho ny filaharana lava. Ny seranam-piaramanidina dia manana biraon'ny paositra, trano fisakafoanana, kafe amin'ny Internet, faran'ny orinasa mpizahatany ary fivarotana maromaro (firavaka, souvenir, maimaim-poana adidy).
Eto, eo amin'ny faritry ny terminal mpandeha iray misy rihana miaraka amin'ny velarana 26 metatra tora-droa, misy ny zavatra ilainao.
Ho fanampin'ireo toetoetra manokana amin'ny seranam-piaramanidina toy ny efitrano fahatongavana, efitrano fandaozana, taki-kaonty, fibaikoana ny fadin-tseranana, ary efitrano fiandrasana koa misy koa ny adidy, trano fisakafoanana, toerana famandrihana hotely, ary ireo masoivoho fitetezana.
Eto ianao afaka mividy karatra SIM izay mpandraharaha finday any Thailand, fifanakalozana volaFamandrihana taxi-be na fiaran-dalambao mankany amin'ny hotely anao.
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Utopao mankany Pattaya
Tsy mandeha any amin'ny seranam-piaramanidina Utopao ny fitateram-bahoaka. Noho izany, mila mampiasa ny iray amin'ireto safidy ireto ianao:
"Limousine seranam-piaramanidina U-Tapao" (U-Tapao Airport Limousine). Minibus (urat)
Ny orinasa mpitatitra dia ny U-Tapao Airport Limousine. Ny saran-dalana izay raikitra sy mahatratra 250 baht amin'ny trano fandraisam-bahiny rehetra any Pattaya na amin'ireo tanàna akaikikaiky indrindra. Ny foiben'ny tapakila dia hita ao amin'ny tranoben'ny terminal terminal
Aza adino fa ny vanona (minibus) mandehandeha any Pattaya dia tsy miala tsy tapaka, fa rehefa vita. Izany hoe afaka miala eo noho eo ianao, na afaka miandry ora antsasaky ny ora iray taorinan'ny kitapo feno. Tokony ho tadidinao koa fa 40 minitra XNUMX ny làlana mankany Pattaya, nefa afaka mitaingina ity bus ity mandritra ny adiny roa ianao, satria mihevitra izy fa mampita ny mpandeha tsirairay any amin'ny hotely.
Taxi avy any Utapao
Raha olona telo na efatra ianao dia tsy misy dikany aminao ny mampiasa taxi, avy amin'ny U-Tapao Airport Limousine. Tsy misy taxi hafa eto. Manodidina ny 1000 baht ny vidin'ny fiara.
Izahay mandoa vola io amin'ny vola mifanakaiky toy ny amin'ny fiara fitaterana, alao ny tapakila izay miala amin'ny seranam-piaramanidina ianao (ho aseho anao ny toerana fandehanana mpandeha) ary miandry ny fiara ho tonga aminao.
Mila mahatakatra ianao, raha misy planeta lehibe roa no nalaina, dia mety misy ny fiodinana eto, ary mila miandry ianao, angamba.
Mandeha lavitra any Pattaya ny taxi ao 35 ka hatramin'ny 50 minitra.
Famindrana any Utopao
Aerlande Airport on the map. Fampahalalana mifandray
Anarana ofisialy: Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena U-Tapao Rayong-Pattaya.
ICAO Code: VTBU.
telefaonina: 038-245595, 038-245600.
Tranonkala ofisialy, birao fahatongavana / fialana an-tserasera: www.utapao.com.
Utapao Airport Reviews (Google review)
Tsy misy Wi-Fi ao amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy mandeha ny mari-pana rivotra. Raha tonga ny fiaramanidina lehibe ho an'ny olona 300, toy ny nanananay, dia ny kianjan'ny seranam-piaramanidina dia tsotra .. milahatra mandritra ny adiny iray amin'ny entana sy roa farafahakeliny raha miditra. Saingy tamin'ny taona 2018, izao dia tsy mieritreritra aho fa lasa mihatsara kokoa. Raha tsy izany, seranam-piaramanidina kely efa mahazatra.
Afaka miandry roa ora ny taxi. Raha hainao dia nandidy fifindrana ianao. Mitovy ny vola, fa mbola haingana kokoa ihany.
Raha misakafo amin'ny ora maika ianao, dia mety haharitra adiny iray mahery ny lalana.
Vote for1Voice against valiny
Misaotra anao amin'ny fanazavana mahasoa fanampiny!
Ny tahan'ny fifanakalozana dia tsy mahasalama. Aleo ny milefitra amin'ny tanàna. Tsy misy adidy maimaim-poana - teboka roa sy ny rehetra. Tsy misy Internet. Ny seranam-piaramanidina mihitsy dia efa voavoatra tsara.
Vitsy ny olona (fa angamba satria tsy nanidina charter izy ireo) dia nandeha haingana ny fanaraha-maso pasipaoro. Seranam-piaramanidina mahazatra, mihevitra fa tsy mipetraka eto.
Nosainay ny bass ho an'ny 250 baht. Niandry adiny iray izy ireo mba hamenoana, ary avy eo dia nitondra ora iray sy sasany adiny iray izy ireo mandra-pahatongan'ny olona nankany amin'ny hotely.